Ihe Anọ Na-eme Ka Mmadụ Nwee Obi Ụtọ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Norwegian Oromo Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Obi ga na-adị m ụtọ ma m lụhaala di, mụta ụmụ.”
“Obi ga na-adị m ụtọ ma m biri n’ụlọ nke m.”
“Obi ga na-adị m ụtọ ma m nweta ezigbo ọrụ.”
“Obi ga-adị m ụtọ ma . . .”
Ì CHETỤLA ụdị ihe a? Mgbe i nwetara ihe ahụ bụ́ mkpa gị, ị̀ ka na-enwe obi ụtọ, ka ihe ahụ ọ̀ kwụsịrị ime gị obi ụtọ ka oge na-aga? N’eziokwu, obi na-adị anyị ụtọ ma anyị nweta ihe anyị chọrọ, ma ihe ahụ na-emecha gbụ anyị. N’ihi ya, ihe na-eme ka mmadụ na-enwe ezigbo obi ụtọ abụghị ihe onye ahụ nwere ma ọ bụ ihe ndị o merela ná ndụ. Otú ahụ ọ bụ ihe dị iche iche na-eme ka ahụ́ sie anyị ike ka ọtụtụ ihe si eme ka anyị na-enwe ezigbo obi ụtọ.
Anyị niile dị iche iche. Ihe mere gị obi ụtọ nwere ike ọ gaghị eme onye ọzọ obi ụtọ. Ka anyị na-eto, ihe ndị na-emebu anyị obi ụtọ nwere ike ghara ịna-emezi anyị obi ụtọ. Ma, a chọpụtala na e nwere ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ nọgide na-enwe obi ụtọ. Dị ka ihe atụ, ihe mmadụ nwere iju ya afọ, enwereghị ndị ọzọ anyaụfụ, ịhụ ndị ọzọ n’anya nakwa ịna-eche echiche nke ọma. Ka anyị tụlee ihe mere ihe ndị a ga-eji mee ka anyị nwee obi ụtọ.
1. NWEE AFỌ OJUJU
Eze Sọlọmọn kwuru na “ego bụ ihe nchebe.” Ma, o kwukwara, sị: “Ọlaọcha agaghị eju onye hụrụ ọlaọcha n’anya afọ, ego agaghịkwa eju onye ọ bụla nke hụrụ akụ̀ n’anya afọ. Nke a kwa bụ ihe efu.” (Ekliziastis 5:10; 7:12) Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara? Ọ pụtara na n’agbanyeghị na ego na-enyere anyị aka igbo mkpa, anyị ekwesịghị ịdị anyaukwu n’ihi na ọ ga-eme ka anyị ghara ịna-enwe afọ ojuju. Eze Sọlọmọn gbara mbọ ka ọ mata ma ego na akụnụba hà na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ. Ọ sịrị: “Ọ dịghịkwa ihe ọ bụla anya m chọrọ nke m na-enyeghị ya. Ọ dịghị ụdị aṅụrị ọ bụla m gbochiri obi m inwe.”—Ekliziastis 1:13; 2:10.
Eze Sọlọmọn rụrụ ọtụtụ ụlọ na ọtụtụ ebe mara mma a na-anọ atụrụ ndụ, nweekwa ọtụtụ ndị na-ejere ya ozi n’ihi na ọ bụ ọgaranya ngada. Ihe ọ bụla ọ chọrọ, ọ na-enweta ya. Ma, gịnị ka ọ mụtara? Ihe ndị ahụ niile o nwere mere ya obi ụtọ, ma obi ụtọ ahụ adịteghị aka. Ọ sịrị na “ihe niile bụ ihe efu” nakwa na ‘ọ dịghị ihe ọ bụla bara uru.’ O mechadịrị kpọọ ndụ asị. (Ekliziastis 2:11, 17, 18) N’eziokwu, Sọlọmọn mụtara na mmadụ ịkpakọba akụnụba anaghị eme ka onye ahụ nwee afọ ojuju. *
Ihe a Sọlọmọn kwuru na nchọpụta ndị e merela n’oge anyị a hà na-ekwu otu ihe? Otu akwụkwọ kwuru gbasara ihe na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ kwuru na onye kpatahaala ihe ọ ga-eri, ego ndị ọzọ na-abatazi ya n’aka adịchaghịzi mkpa iji nwee afọ ojuju. A chọpụtakwala na mmadụ agaghị enwe obi ụtọ ma ọ na-achụ akụnụba ọnwụ ọnwụ ma leghara ihe ndị dị mkpa ná ndụ anya, dị ka ihe ndị gbasara ofufe Chineke.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke ịhụnanya ego na-adịghị na ya, ka unu nọ na-enwe afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a.”—Ndị Hibru 13:5.
2. ENWELA ANYAỤFỤ
Obi anaghị adị onye anyaụfụ mma ma ọ hụ ihe ndị ọzọ nwere yanwa na-enweghị. Ọ na-achọkwa inweta ihe ahụ. Anyaụfụ na-eji nwayọọ nwayọọ amalite. Ọ na-emekwa ka mmadụ ghara ịna-enwe obi ụtọ. Olee otú anyaụfụ si amalite? Olee otú anyị ga-esi mata ma ànyị na-enwere ndị ọzọ anyaụfụ? Oleekwanụ otú anyị ga-esi zere ya?
Otu akwụkwọ a ma ama kwuru na ndị ndị mmadụ na-enwere anyaụfụ na-abụkarị ndị ha na ha hà, dị ka ndị ọgbọ ha ma ọ bụ ndị ha na ha na-azụ otu ụdị ahịa ma ọ bụ ndị ha na ha na-arụkọ ọrụ. Dị ka ihe atụ, onye na-ere ose agaghị enwewere dọkịta anyaụfụ. Ma, o nwere ike inwere onye ọzọ na-ere ose anyaụfụ.
Ihe mere na Peshia n’oge ochie ga-enyere anyị aka ịghọtakwu ihe a. Ndị nwere agba n’ọchịchị obodo ahụ enwereghị eze Peshia anyaụfụ, kama onye ha nweere anyaụfụ bụ Daniel. Otú ha si na-atajiri ya anya mere ha ji kpaa nkata igbu ya. Ma, nkata ahụ kụrụ afọ n’ala. (Daniel 6:1-24) Akwụkwọ ahụ anyị kwuru okwu ya kwukwara na onye ọ bụla ekwesịghị ichefu na anyaụfụ nwere ike ime ka mmadụ mee ihe na-adịghị mma. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị jirila merụọ ndị ọzọ ahụ́. *
Anyaụfụ na-eme ka ihe kwesịrị ịna-eme mmadụ obi ụtọ ghara ime ya obi ụtọ
Olee otú anyị ga-esi mata ma ànyị na-enwere ndị ọzọ anyaụfụ? Jụọ onwe gị ajụjụ ndị a: ‘Obi ọ̀ na-adị m mma ma m hụ na ihe na-agara onye ọgbọ m nke ọma? Ọ̀ na-ewute m ma ọ bụrụ na ihe agaraghị nwanne m ma ọ bụ nwa klas anyị ma akwụkwọ ma ọ bụ onye mụ na ya na-arụkọ ọrụ nke ọma?’ Ihe ọ bụla ị zara ga-egosi ma ị̀ na-enwere ndị ọzọ anyaụfụ. (Jenesis 26:12-14) Otu akwụkwọ kwuru gbasara otú ụmụ mmadụ si akpa àgwà sịrị na e nweghị ihe ọma e meere onye anyaụfụ na-eme ya obi ụtọ. Ihe ndị kwesịrị ịna-eme ya obi ụtọ anaghị eme ya obi ụtọ n’ihi na ihe anaghị atụ ya n’anya.
Ịdị umeala n’obi na inwe obiọma ga-eme ka anyị ghara ịna-enwere ndị ọzọ anyaụfụ. Àgwà abụọ a ga-emekwa ka anyị ghara ịna-ewere ha iwe maka otú ha si akpa àgwà. Baịbụl gwara anyị ka anyị “ghara ime ihe ọ bụla n’ihi esemokwu ma ọ bụ n’ihi ịbụ ndị onwe ha na-ebu isi, kama n’ịdị nwayọọ n’obi na-ewere na ndị ọzọ” ka anyị.—Ndị Filipaị 2:3.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Ka anyị ghara ịbụ ndị onwe ha na-ebu isi, na-akpali ịsọ mpi n’etiti onwe anyị, na-enwere ibe anyị anyaụfụ.”—Ndị Galeshia 5:26.
3. HỤ NDỊ ỌZỌ N’ANYA
Otu akwụkwọ kwuru gbasara otú ndị mmadụ si akpa àgwà sịrị na ihe kacha eme ka ndị mmadụ na-enwe obi ụtọ bụ ha na ndị ọzọ ịdị ná mma, ọ bụghị ọrụ ha, ego ha na-akpata, ebe ha bi ma o bụ ahụ́ ike. Ihe ọ pụtara bụ na anyị chọọ ịna-enwe obi ụtọ, anyị ga-ahụ ndị ọzọ n’anya, hanwa ahụkwa anyị n’anya. Otu onye so dee Baịbụl kwuru, sị: ‘Ọ bụrụ na enweghị m ịhụnanya, ọ dịghị ihe m bụ.’—1 Ndị Kọrịnt 13:2.
E nweghị onye na-agaghị ahụli mmadụ n’anya, e nweghịkwa onye a na-agaghị ahụli n’anya. Dị ka ihe atụ, otu nwa agbọghọ aha ya bụ Vanessa si n’ụlọ ha gbapụ mgbe ọ dị afọ iri na anọ. Ihe mere o ji gbapụ bụ na nna ya bụ́ onye aṅụrụma na-eti ya ihe mgbe niile. Vanessa gara biri n’ụlọ ndị ọzọ, mechaakwa gaa biri n’otu ebe ndị na-enweghị ụlọ na-ebi. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ rịọrọ Chineke ka o nyere ya aka. Chineke zara ya ekpere mgbe ndị na-elekọta ebe ahụ zigara ya ka ọ gaa biri na nke otu ezinụlọ na-eme ihe Baịbụl kwuru. Ndị ezinụlọ ahụ nwere ogologo ntachi obi na obiọma n’ihi na ha hụrụ ibe ha n’anya. (1 Ndị Kọrịnt 13:4) Otú ndị ezinụlọ ahụ si emeso ya nakwa ihe ndị ọ na-amụta na Baịbụl nyeere ya aka ịgbanwe otú o si ele ndụ anya, ọ malitekwara inwe obi ụtọ. O kwuru na ya malitekwara ime nke ọma n’ụlọ akwụkwọ.
N’agbanyeghị na Vanessa echefubeghị ihe papa ya mere ya, ọ hụrụ di ya na ụmụ ya abụọ n’anya ugbu a.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Yirinụ ịhụnanya dị ka uwe, n’ihi na ọ bụ ihe nkekọ zuru okè nke ịdị n’otu.”—Ndị Kọlọsi 3:14.
4. MỤTA ỊNA-EDI IHE
E nweghị onye na-enweghị nsogbu ná ndụ. Baịbụl kwuru na e nwere ‘oge ịkwa ákwá na oge ịkwa ákwá arịrị.’ (Ekliziastis 3:4) Ọ bụrụ na anyị amụta idi ihe, ọ gaghị esiri anyị ike ịna-edi nsogbu ọ bụla bịaara anyị. Ka anyị tụlee akụkọ ụmụ nwaanyị abụọ aha ha bụ Carol na Mildred.
Carol na-arịa ọrịa shuga. Ọ naghị eku ume nke ọma ma o hiwe ụra, ọkpụkpụ azụ na-enyekwa ya nsogbu. Ọrịa anya emeekwala ka anya aka ekpe ya kpọọ. N’agbanyeghị ihe a niile, ọ sịrị: “Anaghị m ekwe ka obi na-ajọ m njọ mgbe niile. Ma, e nwere mgbe m na-eche ụwa m. M chetụ obere, mụ akwụsị. M na-ekele Chineke maka ihe ndị m ka nwere ike ime, karịchaa, ịna-enyere ndị mmadụ aka.”
Mildred nwekwara ọrịa ndị ọ na-arịa. Ọ na-arịa ogbu na nkwonkwo, kansa ara nakwa ọrịa shuga. Ma dị ka Carol, ọ naghị echegbu onwe ya. Ọ sịrị: “M hụrụ ndị mmadụ n’anya, na-akasikwa ha obi ma ha na-arịa ọrịa. Ime otú ahụ na-enyere m aka idi ụwa m. N’eziokwu, achọpụtala m na anaghị m echegbu onwe m ma m kasiwe ndị ọzọ obi.”
Ịkasi ndị ọzọ obi na-eme Carol na Mildred obi ụtọ
Ọ bụ eziokwu na Carol na Mildred na-agba mbọ ilekọta onwe ha, mkpa ha bụ ka ha ghara ịna-echegbu onwe ha nakwa ka ha jiri oge ha na-eme ihe bara uru. N’ihi ya, obi ụtọ ha na-enwe enweghị atụ. Otú ha si edi nsogbu ha na-enyekwara ndị ọzọ ụwa na-esiri ike aka idi nke ha.
AMAOKWU BAỊBỤL GA-ENYERE GỊ AKA: “Obi ụtọ na-adịrị onye na-atachi obi n’ọnwụnwa, n’ihi na mgbe a nwapụtara ya, ọ ga-anata okpueze bụ́ ndụ.”—Jems 1:12.
Amamihe dị na Baịbụl bụụrụ “ndị na-ejide ya aka osisi nke ndụ, ndị na-ejidesikwa ya aka ike ka a ga-akpọ ndị obi ụtọ.” (Ilu 3:13-18) Ọ ga-adị mma ka ị mụọ Baịbụl ka i wee jiri anya gị hụ uru amamihe dị na ya bara. A si ka ekwuwe, Chineke, bụ́ onye Baịbụl si n’aka ya, bụ “onye obi ụtọ.” Ọ chọkwara ka ị na-enwe obi ụtọ.—1 Timoti 1:11.
^ para. 11 Ihe a e kwuru gbasara Sọlọmọn dị n’Ekliziastis 2:1-11.
^ para. 17 Onye ọzọ ndị mmadụ meere anyaụfụ bụ Jizọs Kraịst. Mak 15:10 kwuru na “ọ bụ anyaụfụ mere ndị isi nchụàjà ji nyefee” Jizọs ka e gbuo ya.
Cheta na I Zughị Okè
Ọ bụrụ na ndị nwere obi ike emejọọ ihe, ha anaghị echewe ụdị echiche nwere ike ime ka obi daa ha mbà. Ha anaghị echewe, sị: “O nweghị ihe m ma eme” ma ọ bụ “Abaghị m uru.” Baịbụl sịrị: “Mmụọ nke dara mbà na-amịkpọ ọkpụkpụ.” (Ilu 17:22) Otu akwụkwọ kwuru na ọ bụrụ na anyị chọrọ inwe obi ike, anyị kwesịrị ịghọta na e nweghị onye zuru okè nakwa na onye ọ bụla na-emejọ ihe mgbe ụfọdụ. Ọ bụ anyịnwa ga-eji aka anyị kpebie ihe anyị ga-eme ma anyị mejọọ ihe.
‘Gosi na I Nwere Ekele’
Ndụmọdụ a dị ná Ndị Kọlọsi 3:15 bara ezigbo uru. Nchọpụta ndị e mere gosiri na ọ bụrụ na anyị na-echebara ihe ọma ndị meere anyị echiche, na-egosikwa na obi dị anyị ụtọ maka ihe ọma e meere anyị, anyị ga na-enwekwu obi ụtọ ná ndụ.